မော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ်	24
Posted by တောင်ပေါ်သား on May 17, 2013 in Creative Writing, Poetry | 24 comments
၁၈ နှစ် ကြာပြီးတဲ့နောက်
သမီးဟာ ကလေးသာသာပေါ့ ၊
၁၀ တန်း အောင်ပြီးချိန်မှာ
သမီး ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ မော်ဒယ်လ်ပေါ့တဲ့ ၊
မောဟ ဒေါသ ပြောမရ
လမ်းကြောင်းပြောင်းစို့ သမီးရေ ။
Ko chogyi says: မော်ဒယ်ချောချောလေးရဲ့အဖေလား
Myo Thant says: ရွာထဲက ကြောင်တွေလောက်ကတော့ သနားတယ် ၊
ကြောင်စုန်းဖြစ်ဖြစ် ကြောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ် အေး ဆေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 10299
မောင် ပေ says: မော်ဒယ်
ခင် ခ says: မော်ဒန်လေးများ လှသွေးကြွယ်လို့
သူကတော့ ပြုံးကာရွှင်ကာ နေပြပါရဲ့။
ရွှေတိုက်စိုး says: အော်အဖေတစ်ယောက်အနေနဲ. စိုးရိမ်သင့်တာပဲလေ….
ဒီအရွယ်နဲ.ဒီခေတ်မှာ လမ်းကြောင်းပျောက် ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတဲ့ လူငယ်လေးတွေနဲ.စာရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာတော့ကောင်းပါတယ်…
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ကိုယ့်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ. ဆင်ခြင် ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်ပဲ… အဖေက လမ်းပြပေးရတော့မှာပေါ့……
TNA says: ရွာ့ကာလသားများ မျက်နှာချိုသွေးနေဒေါ့မှာမြင်ယောင်ပါအိ။ ဒီလိုအဖေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့သမီးကိုလဲ ဂုဏ်ယူသလို ဒီလိုသမီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖေကိုလဲ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
သူကလေး says: အာ့လေးက အူးမျိုးသန့်သမီးလေးလား
မီးတောင် ဖွဘုတ်မှာတွေ့လို့ like ပေးလိုက်သေးဒယ် ငှဲငှဲ
ယောကျာ်းလေးမဖြစ်ရတာ နာသကွာ ….
သမီးအတွက်စိတ်ပူပေးတဲ့ အူးမျိုးသန့်ရဲ့အေးမြတဲ့ချစ်ခြင်းကို နားလည်းပါတယ်လေ
ရွှေ ကြည် says: ကိုမျိုးသန့်ရေ စိုးရိမ်သင့်ပါတယ် ရွှေကြည်ကတော့သဘောမကျဘူးရယ်
ဒီလောက ကရှုပ်ထွေးတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုဦးတော့ ရွှေကြည်တော့မကြိုက်ဘူးရယ် ဒါပေမယ့်လည်း ပြောမရရင်တော့ နောက်ကနေသာ စိတ်ချရတဲ့တယောက်သာကပ်ပြီးလိုက်ပေတော့ဗျို့ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေ ဒီလိုပေါ်ပြူလာဖြစ်တာကိုအားကျကြတာများနေတယ် အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဒီနယ်ပယ်မှာမှမဟုတ်ဘူး နယ်ပယ်စုံမှာရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုနေပြီထင်တယ်
Myo Thant says: သမီးက နားလည်ပါတယ် ၊ သူက အလတ်ပီပီ အဖွား နဲ့ အဖေက အကြီး နဲ့ အငယ်ကို ပိုချစ်တယ်လို့ ငယ်ငယ်ထဲက ထင်ခဲ့သူမို့ ဆုံးမတဲ့ နေရာမှာ ပိုပြီးသတိထားရပါတယ်ဗျာ ၊
အရှင် သခင် ဆရာ ကိုယ်တော် mobile says: ဦးမျိုးသန့်ရေ……
ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းသလို ရတက်မအေး စရာလည်းဖြစ်နေတဲ့
အနေအထားလေးတွေကို ဦးမျိုးသန့်အစား ၀င်ပြီးစဉ်းစားမိပါတယ်။
ဦးမျိုးသန့် ရဲ့လိပ်စာလေး ပြောပါလားဗျ………….
Myo Thant says: လိပ်စာ က
ကန်ဇွန်းရွက် နဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လို့ ပြောကြတာပဲဗျ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ဘွင်းဘွင်း ပြောရရင်
ကျုပ်ဂဒေါ့ အိုက်လိုဟာဒွေ ကျိုက်ဝူးးး
ညက်စိ အာသာပြေဘဲ ငမ်းမိဒါ .. သမီးဂလေးရေ …
ဘိုးဘိုးမျိုး ပေါဒလိုဘာဗျဲ ..
ဘဘအံ ဂလည်း ပေါလိုက်ဘာဒယ် ..
လမ်းဂျောင်းပြောင်းစို့ သမီးဂလေးရယ် …
ပြောင်းစရာ မချိ ဘဘအံ ဆီဒါ လာဂဲ့ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4108
Foreign Resident says: အခု လက်ရှိ အချိန် အထိကတော့ ၊ မေါ်ဒယ် အလုပ်ဟာ ၊
၁ ။ စားဝတ်နေရေး ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ profession တစ်ခု မဟုတ်သေးပါဘူး ။
၂ ။ မေါ်ဒယ် ဖြစ် နာမည်ကြီးလာရင် သူဋ္ဌေး ကို ရှာယူနိုင်တဲ့ မက်လုံးတော့ ရှိပါတယ် ။
Myo Thant says: ၁ = မှန်ပါ့ဗျား ၊ အဲဒီလမ်းပေါ်မှာ အလဲလဲအကွဲကွဲတွေက ၉၀ % မကပါဘူး ၊ ဒါကြောင့် သမီးကို ဗီတိုအာဏာသုံးပြီး လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးရတာပါ ၊
ဘဲရှုပ် says: ဖွဇက် အဲလေ ဂဇက်ကို မလည်ဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပါပြီ
အပြာရောင် ပေးတဲ့သူတွေလဲ ရှိနေဆဲ
မွေးရာပါ အကျင့်နဲ့တူမယ် ထင်တယ်
စုန်း ဘု ရင် says: တစ်ခွန်းပဲ ပြောလိုက်မယ်
ယောက္ခထီးကြီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
Myo Thant says: ရန်သူတစ်ပါးတိုးလာပြန်ပြီ
အံစာတုံးနဲ့သာ စီးချင်းထိုးတော့ကွာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး says: တိန် ….
ခီညား သမီးဒေါ်ဂလေး (C/D to ဒက်ဒီကြောင်) ကို သိမ်းပိုက်ဒယ် …
အယူခံဝင်ခွင့် မချိ …
တံခါးပိတ် စနစ်ဘဲ ..
Phoe Thitsar says: ဦးဦးမျိုး စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ …..
မဟာစင်တောင် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားလို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်သက်သာလည်း
လမ်းကြောင်းမပြောင်းရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဖျားတော့ခတ်ခံရမှာပဲ ဦးမျိုးရေ..
မိချောင်းမင်း ရေကင်းပြတယ်လို့တော့ မမှတ်ပါနဲ့…..
သားသားတို့လို လူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့မှာဆိုးလို့ …… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖော် လူသူတော်….. ဟာဟ
Mr. MarGa says: မော်ဒယ်
လောက ကတော့ ရှုပ်လွန်းတယ်
အဲဒါတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့သူဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်
Mလုလင် says: နဲနဲ ပြောကြည့်မယ်ဗျာ . . ပိုစ့်ပိုင်ရှင်က . . ရင်ဖွင့်ချင်တဲ့သဘောနဲ့တူရဲ့ . . ကြည့်ရတာ . . ဦး Myo Thant လဲ သမီးငယ် အတွက် ရတက် မအေးပဲ . . လမ်းကြောင်းပြောင်းပစ်လိုက်ဖို့ . . . စိတ်ကူးထားပြီးသား နေမှာပါ . .။ သမီးအလတ် ဆိုတော့ . .နဲနဲ ပြောရခက်ပါတယ် . . ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် . . ကျွန်တော် တို့တွေ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို နဲနဲ ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ် ထင်တယ်ဗျ ..။ အဲ့ဒီ့ အရွယ်က အဖွဲ့တစ်ခုခုထဲမှာ အကောင်ဖြစ်ချင်စိတ်၊ ကိုယ့်ကို လူများများ က သိနေစေချင်စိတ် အဲ့လို စိတ်တွေ ငယ်ထိပ် တက်ကပ် တဲ့အရွယ် တဲ့ဗျ . . ဆိုတော့ . . ဗျာ . . ဒီကနေ စ နောက်ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာ . . ကျရှုံး မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ရတဲ့အခါ . . ဖေဖေ က သမီးဖြစ်ချင်တာကို ပေး မလုပ်လို့ ဆိုပြီး အပြောမခံ ရပဲ . . ဖေဖေ ကြောင့် . . သမီး မော်ဒယ် မလုပ် မိတာ ကံ အရမ်းကောင်းတယ် . . ဖေဖေ ရေ .. . ဆိုတဲ့ ပီဟ၀ါဆာ ချစ်ဖွယ် သောစကား ကိုသာ ကြားနိုင်ပါစေ လို့ . . . အလေးအနက် ဆုတောင်း ပေးပါတယ် ဗျ . ။
မောင် ပေ says: အေးဗျာ
ဦးဦးအန်ကယ်မျိုးသန့်တို့ ဆီ ၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာများနဲ့ဂါဝရပြု သွားရမယ်ဗျို့ 
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 161
TheWinner Getprize says: ငယ်ငယ်က secretary သင်တန်းတွေတက်ပြီး secretary ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို အဖေက အသည်းအသန် တားခဲ့တာကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။
ကျွန်မလည်း အဖေ့ကြောင့်ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးမျိုးသန့်သမီးလေးလည်း အဖေဖြစ်စေချင်တာကို နားလည်လာဖို့ မျှော်လင်မိပါတယ်ရှင်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12147
အလင်း ဆက် says: ဖတ်သွားတယ်ပဲ.ပြောတတ်တယ် ။
ခံစားသွားပါတယ်.လို့ထပ်ပြောတတ်တယ် ။